Senator Cabdi Qeybdiid “Gudigii loo xilsaaray baarista weerarkii lagu qaaday Gurigeyga, ma ahan mid aan ku qanacsanahay”. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa ka hor sheegay Xildhibaanada Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu wali raadinayo sababtii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday gurigiisa sanadkii 2017-kii.
Mr.Qeybdiid ayaa kulanka golaha aqalka sare ka sheegay in ciidamada weeraray Gurigiisa la siisay amar khaldan oo ah in Gurigiisa lagu tuhunsanaa inuu ku jiro Ninkii ka dambeeyey Qaraxii 14-kii October ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Cabdi Qaybdiid wuxuu sheegay in Ciidamadii weeray gurigiisa ay ka soo baxeen Dugsiga Gen .Gordan Oo ah Xarun Ciidamada ay Imaraadka ku tababaraan, isagoo sheegay in Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA, ay amarkaasi Gurigiisa lagu wareeray bixiyeen Ciidamada Imaaraadku tababaray weerareen Gurgiisa.
Dhanka kale Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa sheegay in wali wax jawaab uusan helin, kadib weerarka Gurigiisa oo sedex bilood hada laga joogo, wuxuuna sheegay inuusan ku qanacsanayn Guddiga uu Madexweynaha u magacaabay inay baaraan Kiiska weerarka lagu qaaday Gurigiisa 31-kii December 2017-kii.